လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ mail ပို့နည်းလေးပါ
ဖိုင်ဆိုဒ် 100 MB to 1GB အထိ ဆိုဒ်ကြီးတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပို့ချင်ရင် ပုံမှန် gmail < compose mail > attachafile နဲ့ ဆိုရင် တော်တော် ကြာပါလိမ့်မယ် (ဆိုဒ်ပေါ်မူတည်ပြီး)။ ဒီတော့ ကျွန်တော် ပို့နည်း အသစ်တခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ဒီပို့ နည်းကတော့ ပို့ ချင်တဲ့ဖိုင်ကို upload လုပ်ပြီး link ကိုပဲကိုပေးချင်တဲ့သူဆီကို ပေးရတဲ့ ပုံစံပါ။ ဒီတော့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့သူအနေနဲ့download တော့ဆွဲ ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မကြာပါဘူး။ အောက်က link လေးတွေ ကနေ upload တင်ပြီး ပို့နိုင်ပါတယ်ဗျာ...........
Posted by Coralchitthu at 9:00 AM
English Slang Slang words and phrases in EnglishSl...
TensesThe English Tense SystemThe links below are ...
Verb FormsEnglish verbs come in several forms. For...
What are Verbs?The verb is king in English. The sh...
အားလုံး အဆင်ပြေပြေ ကျော်ခွပြီးသွားနိုင်ကြပါစေ....
လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ mail ပို့နည်းလေးပါ ဖိုင်ဆိုဒ် 10...
Speed up Window 7
Gtalk အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၁)
Babylon 8.0 Installation Guide သုံးနေတဲ့ Babylon က...
I came, I saw, I conquered Said by Julius Caesar, ...
A half truth isawhole lie.(You can't) H...
First Love ~ John Clare ...